Adeegga Rafcaanka ee Amazon, Hadda Koontadaada dib u soo celi
Bixiyeyaasha Adeegga Rafcaanka Koontada ugu Fiican ee Amazon
Waxaa jiray isbeddel xagjir ah oo ku yimid muuqaalka e-commerce. In kasta oo, kuwa bilaabay bilowgii hore ay wali leeyihiin faa'iidada ganacsiga bisil. Amazon waa mid ka mid ah aaladahaas oo hormuud ka ahaa adeegsiga Online -ka. Adeeg ayaa bilaabay Jeff Bezos markii hore bilaabay iibinta buugaagta. Iyo, markaa iibiyayaal kale ayaa sidoo kale la soo dhoweeyay. Wuxuu u noqday suuq furan dadka iibiya badeecadaha kala duwan ee qaybaha kala duwan leh.
Haddii aad falanqeyso Amazon markaa waxaad dareemi doontaa inay u egtahay mashiinka raadinta alaabada. Waxay leedahay ku dhowaad nooc kasta oo qalab ama alaab ah oo qofku qiyaasi karo. Amazon waxay u adeegtaa sidii hal meel wax kasta. In kastoo, tan lagu gaadhay inta badan iibiyaasha la xidhiidha barxadda. Dad aad u tiro yar oo ka socda dhinaca macaamiisha ayaa arrintan ka og. Laakiin, haddii aad iibiye tahay markaa waad ogtahay xaddiga tartanka hadda jira.
Iyo, sifiican waxkasta oo weyn oo dhaca, dadka qaarkiis waxay rabaan inay faa'iidooyinka horay uqaataan. Qaar ka mid ah macaamiisha ayaa isku dayay inay ka faa'iideystaan ​​barxadda iyo iibiyeyaasha kuwaas oo doonayay inay ku gaaraan iibsi badan waqti yar. Tani waxay ka dhigtay Amazon inay ku soo rogto xeerar iyo qawaaniin macaamiishooda iyo sidoo kale kuwa wax iibiya. Laakiin, waa dhinaca iibiyaha inta badan shaqada laga joojiyo maxaa yeelay waa kuwa ku kaca tayada. Iyo, haddii ay ku guuldareystaan ​​inay sidaas sameeyaan ama isku dayaan wax kasta oo aan loo baahnayn markaa barnaamijka ayaa mas'uul ka ah inuu hakiyo akoonkooda. Xaaladdan oo kale, qofku wuu kaligiis rafcaan ka qaadan karaa laakiin waa ku habboon tahay in la raadsado adeegga rafcaanka Amazon. Sababta Sababtoo ah fursadaha helitaanka koontadaada waqti yar ayaa aad uga sarreeya marka hore.
Hadda si aad wax badan uga ogaato adeegga rafcaanka ee Amazon iyo ka joojinta akoonka iibiyaha hoos ka aqri.
Sidoo kale Akhri: Adeegyada Rafcaanka Amazon miyay waxtar leeyihiin 2021?
Miyaan dib u noolayn karaa koontadayda iibiyeha iyada oo aan lahayn adeegga rafcaanka Amazon?
Tani waa mid ka mid ah su'aalaha ugu caansan ee la waydiiyo bulshada iibiyaha Amazon. Dadka adeegyada ku bixiya adeegga racfaanka ee Amazon, waa dad aniga iyo adiga oo kale ah. Maahan wax ku saabsan inaad sameyn kartid laakiin waa wax ku oolnimada. Waxaan nahay adeeg rafcaan oo Amazon ah waana ognahay inaysan ahayn cilmiga gantaalada. Hase yeeshe, inaad noqoto mid wax ku ool ah oo sax ah waa wax ay tahay inaad daryeesho. Marka hore, Amazon waxay bixisay tilmaamo ku saabsan sida rafcaanka loo qaato. Iyo, haddii aad isku kalsoon tahay markaa horay u soco.
Laakiin, waxaan kugula talin lahayn inaad marka hore fahamto arrinta taagan. Qoritaanka ah Warqadda rafcaanka ee Amazon ma ahan mid khiyaano leh laakiin waxaad u baahan tahay inaad fahamto dhibaatada oo aad la timaado xal lagama maarmaan ah si wax looga qabto. Fikrad ahaan, markii Amazon ay joojiso koontada iibiyaha, waxay u diraan iibiyaha ogeysiis. Ogeysiintaan, waxay ku xusayaan sababta koontada loo hakiyay. Haddii aad fahantay, iskuday inaad qaabeyso warqad kuu sheegaysa Amazon sida aad u xallin karto dhibaatadan. Iyo, waa inaad sax ahaataa oo aad fahamtaa arrinta. Iyo markii ugu dambeysay laakiin uguyaraan, ha argagixin.
Iyo, haddii aad si fudud u rabto inaad dibadda ka bixiso tan markaa waad kireysan kartaa adeegga rafcaanka Amazon. Waxaan kuu xaqiijin karaa inay mudan tahay maalgashigaaga gaar ahaan markaad ganacsi lumiso maalin kasta inta lagu jiro ganaaxa.
Sababaha ka dambeeya Ka -hakinta Koontada Iibiyaha Amazon
Iyada oo tirada alaabada sii kordheysa laga helayo barxad, tirada sababaha qofku u joojin karo ayaa sidoo kale kordheysa. Sababta Sababtoo ah waxaa jira in kabadan hal wado oo iibiyayaashu ay xadgudub ku noqon karaan. Iyo, iyada oo leh bulsho aad u tiro badan, waxay ku adkaysaneysaa inay tahay in liis la qoro halkii laga heli lahaa dhawr qodob oo keliya. Sidaa darteed hoosta waxaan ku soo sheegnay qaar ka mid ah sababaha dhabta ah ee ka dambeeya joojinta iibiyaha Amazon:
Xisaabaad Badan: Haddii aad leedahay akoonno iibiyayaal badan oo ku yaal Amazon markaa fursadaha ayaa laga yaabaa inaad hesho ganaax. Amazon waxay u oggolaaneysaa hal xisaab iibiya qofkiiba. Algorithm-ka AI wuxuu awood u leeyahay inuu hubiyo aqoonsiyadaada. Iyo, haddii ay ku habboon tahay koonto kale, mid ayaa laga yaabaa inuu helo shaqo joojin iyo wuxuu u baahan karaa adeegga rafcaanka Amazon.
Liis aan habboonayn: Sida ku cad tilmaamaha Amazon, waxaa jira alaabooyin gaar ah oo uusan qofku ku iibin karin goobta. Tani waxay noqon kartaa mid u gaar ah waddan ama si fudud looga mamnuucay Amazon, dhammaan meeraha. Tusaale ahaan Hindiya iibinta alaabada ay ku ciyaaraan dadka waaweyni waa mamnuuc sidaa darteed cidna looma oggola inay iibiso. Iyo, haddii lagugu qabto inaad ku iibineyso Amazon markaa koontadaada ayaa heli doonta rafcaan ganaax ah.
Xayeysiinta boggaaga: Amazon waxay u oggolaan doontaa iibinta badeecadaha kala duwan ee noocyada kala duwan ee leh degelkooda. Laakiin, uma oggolaanayso inay xayeysiiyaan meheraddooda ganacsi e-commerce. Haddii aad sameyneyso markaa waxaad u baahan kartaa adeegga rafcaanka Amazon.
Liiska Waxyaabaha Aan La Xaqiijin: Haddii macaamiisha ay ku qoraan badeecadaada mid aan sax ahayn markaa koontadaada ayaa laga yaabaa inay hakiso. Waxaa jira liisas aad u tiro badan oo ku yaal Amazon oo sheeganaya inay yihiin kuwo sax ah laakiin aan ahayn. Haddii ay sidan tahay sheygaaga markaa waxaan kugula talin lahaa inaad joojiso iibintiisa.
Liiska Waxyaabaha Been Abuurka ah: Midkani waa mid aan waxba ka jirin, iibinta wax kasta oo been abuur ah waa sharci darro. Amazon waxay u aragtaa inay tahay mid lagu kalsoonaan karo dhammaan badeecooyinka ku qoran bogga. Haddii aad tahay qof iibinaya wax kasta oo aad u malaynayso inay been abuur tahay markaa ka hel xog lagama maarmaan ah oo ku saabsan sheyga. Iyo, haddii ay suurtagal tahay jooji iibinta illaa aad kahesho caddayn.
Cabashooyinka Amniga Amazon waxay aad ugu jirtaa barta markay tahay xeerarka badbaadada. Haddii alaabtaadu jabiso taas fursad kasta, hubso inaad hagaajiso ama si fudud u joojiso iibinta.
Sawirada xaddidan: Waxaa jira noocyo badan markii ay timaado sawirrada xaddidan. Haddii aad dhajisey sawir aan u muuqan mid ku habboon barxadda markaa iska siib. Sidoo kale, midna looma oggola inuu isticmaalo sawirka sheyga qof kale. Tani waa mid ka mid ah sababaha ugu badan ee ka dambeeya joojinta iibiyaha. Su'aalo badan oo aan helno waxay ku saabsan yihiin dhacdadan. Iibiyeyaashu badanaa waxay isticmaalaan sawirro aysan ruqsad u haysan. Haddii aad tan samaynaysid markaa jooji, tani macnaheedu waa inaad ku xadgudbeyso siyaasadaha IP-ga oo aad u baahan tahay adeeg rafcaan oo Amazon ah.
Shayga la Isticmaalay: Amazon waxay ogolaataa iibinta alaabada la isticmaalay laakiin qaybta dib loo hagaajiyay. Haddii aad iibineyso shay la isticmaalay sida cusub markaa dib u eegis macmiil oo xun ayaa kugu qaadi doonta qarka u saarista. Ka fogow tan oo hubi in wax kasta oo aad iibiso ay yihiin kuwo cusub oo neecaw ah.
Waxyaabaha dhacay: Amazon sidoo kale waxay hoy u tahay walxaha qarxa. Amazon badanaa waxaa loo yaqaan qalab laakiin waxay sidoo kale iibisaa alaabooyin kale oo badan. Haddii aad iibinayso shey dhacay ka dib waxay noqon kartaa calan weyn oo casaan ah. Waa inaad haysataa jeeg alaabada aad keeneyso. Hubso inaad ula dhaqanto Amazon sidii ganacsi kasta oo sharci ah. Waa suurtagal in dib loo helo laakiin howlaha noocan oo kale ah waxay howsha ku adkeynayaan adeegga rafcaanka Amazon sidoo kale.
Shayga aan loo iibin sida lagu sharraxay: Sharaxaadda alaabtu waa arrin aad uga weyn. Si macquul ah, qofku waa inuu la dagaallamaa tartan adag. Haddana, ma aha sabab loo helo tuuryo markii uu meerisku aad u quudhsado. Dad badan oo iibiyayaashu waxay sharraxayaan awooda badeecada oo aad uga buunbuunisay sidii ay ahayd. Haddii aad ku helayso jawaab celin diidmo ah markaa gabi ahaanba adigaa iska leh. Sharaxaad ayaa loola jeedaa in lagu soo bandhigo badeecadaada habka ugu saxsan uguna runta badan. Oo aniga igu kalsoonow, waa habka lagu helo khibrad ganacsi oo hufan oo ku saabsan barxadda. Sidaa darteed, haddii aadan rabin inaad kireysato adeegga rafcaanka Amazon gaar ahaan dib u soo celinta markaa iska ilaali qiimo kasta.
Amarka Sare ee Cilad: ODR ama Order Defect Rate waa boqolkiiba amarada cillada leh ee aad adigu dirto. Waa dambi weyn oo ka muuqda indhaha madasha. Fikrad ahaan, Amazon waxay kaliya u oggolaaneysaa ODR aan ka badnayn 1%. Sidaa darteed, haddii aad helayso wax cabasho ah oo ku saabsan shey cilladaysan, hubi inaad wax ka beddesho ka hor waqtiga.
Khibrad macmiil oo xun (NCX): Dib u eegista macaamiisha ayaa ah muraayadda nooca adeegga aad siinayso macaamiishaada. Haddii aad si joogto ah u helayso dib u eegista xun fursadaha ayaa ah sheyga ayaa khalad ah. Haddii tani kugu dhacdo adiga markaa tallaabo degdeg ah qaado. Fikrad ahaan, sida adeeg rafcaanka Amazon, waxaan ka codsaneynaa macaamiisheenna inay sidaas oo kale sameeyaan. Way fududahay in la beddelo waxaad iibineyso marka loo eego luminta xisaabtaada iibiyaha.
Marka kuwani waxay ahaayeen sababaha ugu badan ee ka dambeeya joojinta iibiyaha. Haddii aad ka shakisan tahay in koontadaadu ay ku xadgudbi karto qof ka mid ah markaa iska hubi ASAP. Taas ka sokow, badanaa waxaa jira waqtiyo markii koonto loo joojiyo sababo badan awgood. Way adkaan kartaa in la xalliyo laakiin xisaabtankaaga ka dhig sida ugu macquulsan. Oo ku camal fal ASAP, u daa iyada si aad u hagaajiso mustaqbalka waxay kugu noqon kartaa shaqo joojin. Hore ayey ula soo noqotay qaar ka mid ah macaamiisheenna adigana way kula dhici kartaa adiga.
Xisaabta La Hakiyay? Hadda Na Soo Wac!
Sidee Adeega Rafcaankaagu kuu caawin karaa?
Markaad ka hadlaysid adeegga rafcaanka Amazon, warqadda rafcaanka ayaa kaalin weyn ku leh. Waraaqda rafcaanka Amazon waa isgaarsiinta kaliya ee u dhaxeysa adiga iyo Amazon oo dib u soo celin karta koontadaada. Haddii aan lagu soo degin jihada saxda ah markaa waxay qaadan kartaa waqti. Asal ahaan, tani waa sababta ay dad badani u yihiin kirayso Adeegga Rafcaanka Amazon. Sidii hore loo sheegay, way sahlan tahay in koontadaada dib loo soo celiyo isku daygii koowaad. Haddii kale, waxay qaadan kartaa waqti badan waxayna ku dambayn kartaa inaad lumiso ganacsi badan.
Hadda, haddii aan ka sii hadalno arrinta markaa warqad rafcaan ah oo Amazon ah waa saxanka ugu weyn laakiin maaddada ugu muhiimsan waa Qorshaha Waxqabadka. Qorshaha ficilku waa tallaabooyinka saxda ah ee aan qaadi doonno si aan u hagaajino arrinta ay ogeysiisay shirkadda Amazon. Si taas loo sameeyo, waxaa jira dhowr waxyaalood oo aan fiiro gaar ah u leenahay:
Si taxaddar leh u akhri ogeysiiska ay soo dirtay Amazon.
Hel fikrad cad oo ku saabsan arrinta taagan iyo sida koontadaadu ugu xadgudubtay.
Hadda abuur tallaabooyinka lagama maarmaanka ah, sidaad u hagaajin lahayd.
Aad ayey uga faahfaahsan tahay tan laakiin talaabooyinkaasi waa waxyaabaha ugu muhiimsan. Sidoo kale, dib-u-soocelin kasta waa mid gaar ah, sidaa darteed, waxaa muhiim ah inaan fiiro gaar ah u yeelano mid kasta & dib u soocelin kasta si ka duwan. In kasta oo, waayo-aragnimadayada kuwan leh ay marwalba noo fududeyneyso inaan wax ka qabanno codsi kasta.
Baadh Adeegyadeena Rafcaanka Ka -joojinta ee Amazon
Ka dib markii aan dhammeyno abuurista qorshe waxqabadka su'aal gaar ah, waxaan u gudubnaa qorista warqad rafcaan ah oo Amazon ah. Waxay u egtahay warqad kale oo wali ka yara duwan. Ujeedadu waa in sida ugu macquulsan loo hadlo inta ugu yar ee suuragalka ah. Iyo dusheeda, noqo wax yar qaabeysan. Sidaa darteed, hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah dhaqamada aan raacno:
Kooban & Sax ah: Sidaan kor ku soo sheegnay, ”Hadal intaa ka sii yar oo eray ah”. Waxaa jira rafcaan aad u tiro badan oo Amazon maalin kasta hesho. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah inaan wax walba ku xusno sida ugu fudud ee ugu macquulsan. Iskuna day inaad ka dhigto mid gaaban oo ku filan wakiilka inuu si fudud wax u akhriyo.
Qorshaha Waxqabadka: Maadaama aan horey ula nimid qorshe ficil, hada waxaa la joogaa waqtigii aan si sax ah u sharxi lahayn. Waxaan isku dayeynaa inaan adeegsanno qodobbada rasaasta si aan kor ugu qaadno waxtarka marka ay timaaddo iskaanka warqadda. Iyo korkeeda, qodob kasta wuxuu tilmaan cad u yahay talaabooyinka aan qaadi doono.
Qaabka: Qoraal kasta oo qoran waa gabal sheeko oo sheeko xambaarsan. Waxaan sidaa u leenahay maxaa yeelay qisadu waa muhiim. Waxaan hubineynaa inaan wax walba u sheegno siday u kala horreeyaan oo aan mid walba iyo arrin kasta mid mid ugu qaadno sharraxaad ka bixinaysa sida wax looga qaban doono.
Kalsoonida: Waa muhiim in la ilaaliyo dhawaaqa warqadda. Mid waa inuu fahmaa in awoodda iibinta ee Amazon ay tahay fursad. Haysashada fikirkaan, waraaqda oo dhan waa la dhisay. Waxaa muhiim ah in la fahmo in sharciyadaan & qawaaniintani ay yihiin kuwa iibiya laftooda mustaqbalka fog. Haddii aad tahay shaqsi daacad ah oo hawlkar ah oo isku dayaya inaad noloshaada ka dhigto mid sax ah markaa waad fahmi doontaa sababta ay taasi u dhacday.
Sida adeeg rafcaan oo Amazon ah, waxaan u qaadaneynaa dhismaha rafcaanka si aad u culus. Tani waa mid ka mid ah waajibaadkayaga asaasiga ah waxaanan u qaadannaa si shaqsiyan ah.
Waqtiga ku habboon ee dib loogu soo celinayo Koontada Iibiye
Ma jiro wax gaar ah oo leh waqtiga. Sidaan horay u soo sheegnay dib u soo celin kasta waa mid u gaar ah macnaheeda. Waxaan aragnay waqtiyo markii waraaqaheena racfaanka dib loogu soo celiyay akoonada 24 saac gudahood. In kastoo, haddii macmiil noo imanayo privy oo isku dayaya warqad dib u soo celin, dib u soo celinta ayaa laga yaabaa inay muddo qaadato. Iyada oo rafcaanada Amazon, markii ugu horeysay ee soo jiidashada, sidaas darteed, hubi in warqadda amazon racfaanka ay kufiican tahay markii ugu horeysay lafteeda.
Sidee looga fogaadaa hakinta xisaabta mustaqbalka?
Waxaa jira laba siyaabood oo qofku ku sameyn karo tan. Midka koowaad waa inuu noqdaa mid firfircoon oo ku saabsan mid walba iyo wax walba. Midda labaad waa in la kireysto adeegga rafcaanka Amazon. Waxaa jira adeegyo badan oo aan kujirno annaga oo bixiya kahortagga ka joojinta. Shaki kuma jiro inay dhib noqon karto in hal mar hawlo badan laga qabto. Tani waa sababta ay dad badan oo iibiyayaashu ugu dhiibaan dayactirka caafimaadka koontadooda iibiyaha adeegyada rafcaanka Amazon.
Haddii aad tahay qof raadinaya adeegga rafcaanka Amazon markaa waxaa laga yaabaa inaan ku caawinno. Waxaan bixinnaa adeegyo sida ka -hortagga hakinta Iibiyaha, baaritaannada caafimaadka koontada joogtada ah, iyo xoojinta iibka. Sidaa darteed, haddii aad danaynayso markaa hel la -tashigaaga bilaashka ah gujinaya halkan.